वर्षाले रुपन्देहीमा करोडौंका इट्टा नष्ट- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
वर्षाले रुपन्देहीमा करोडौंका इट्टा नष्ट
पुस १७, २०७८ माधव ढुंगाना
भैरहवा — तीन दिनअघि परेको बेमौसमी झरीका कारण रुपन्देहीमा करोडौं रुपैयाँको काचो इट्टा गलेर नष्ट भएको छ । गत मंगलबार र बुधबार परेको वर्षाले रुपन्देहीका इट्टा उद्योगमा घाममा सुकाउन राखिएका काचो इट्टा गलेर नष्ट भएका हुन् ।
रुपन्देहीमा संचालित ४७ वटा इट्टा उद्योगमा सुकाउनका लागि राखिएका ३ करोड गोटा भन्दा धेरै काचो इट्टा गलेर नष्ट भएको लुम्बिनी इट्टा उद्योग व्यवसायी संघ, रुपन्देहीले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ताले यसबाट रुपन्देहीका व्यवसायीले ८ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति ब्यहोर्नु परेको र इट्टाको माग बढेको खण्डमा इट्टाको अभाव समेत हुन सक्ने बताए ।
‘मौसम पूर्वानुमान शाखाले केही दिन अघिदेखि पानी पर्ने सुचना जारी गरेपनि करोडौंको संख्यामा राखिएका सबै इट्टालाई ओत लगाएर सुकाउन संभव नै थिएन’ गुप्ताले भने, ‘मंसिरको दोश्रो सातादेखि धमाधम काचो इट्टा तयार पारि घाममा सुकाएर माघको सुरुदेखि पोलेर तयार पार्ने सिजन हो ।’
घाममा सुकाएर पकाउन तयार पारिएको काचो इट्टा गलेपछि त्यसलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैन । भट्टामा पोल्नका लागि तयार पारिएका काचो इट्टा सुक्त चैत बैशाखमा कम्तीमा पच/छ दिन र हिउँदको याममा १२ देखि १५ दिन लाग्ने बताए ।
‘भट्टामा पोल्नुअघि नै घाममा सुकाउनै पर्ने अवधिमै झरी आयो’ गुप्ताले भने । यतिबेला सानो परिमाणमा उत्पादन गर्ने उद्योगमा पनि दैनिक ४० हजार गोटाभन्दा धेरै काचो इट्टा तयार पार्ने गरिन्छ । एउटा उद्योगमा १ सय देखि २ सय संख्यासम्म कामदार कार्यरत हुन्छन् । काचो इट्टाको बिमा गर्नेतर्फ सरकार र बिमा कम्पनीले कुनै पहल नगर्दा बेमौसमी वर्षाले पार्ने यस खालको नोक्शानी हरेक बर्ष खेप्दै आउनु परेको गुनाशो व्यवसायीको छ ।
व्यवसायीले पकाउन तयार पारिएको इट्टा नष्ट भएपछि माटो र भस्कटमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी छुट गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन् । ‘व्यवसायीलाई यति ठूलो बज्रपात परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट अपेक्षा गर्नु स्वभाविकै हो । अन्य समयमा सरकारले तोकेको सबै किसिमका कर तिरेका छौं । हामीलाई दुःख पर्दा सरकारले हेर्छ भन्ने अपेक्षा छ’, गुप्ताले भने ।
प्रकाशित : पुस १७, २०७८ १५:३७
लटरम्मै फलेका सुन्तला टिप्ने चटारो
काठमाडौँ — चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका ३ स्थित ढाप गाउँ अहिले सुन्तलाले पहेंलै भएको छ । बोटरभरी लटरम्म सुन्तला फलेका छन् । किसानलाई सुन्तला टिपेर बिक्री गर्न भ्याइनभ्याइ छ । व्यापारी गाडी लिएर बगानमै पुग्छन् । व्यापारीलाई किसानले पहिल्यै क्रेटमा सुन्तला हालेर तयारी अवस्थामा राखिदिन्छन् । यो गाउँका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सुन्तला हो ।
स्थानीय युवा महेन्द्र गुरुङका अनुसार गाउँमा एक जना किसानले वार्षिक कम्तीमा एक लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको सुन्तला बिक्री गर्छन् । सुन्तला पोखरा, भैरहवा, बुटवल, नारायणगढ, मुग्लिन, काठमाडौं जाने गरेको छ । धेरै व्यापारीको सुन्तला जम्मा गर्ने बजार भने फिस्लिङ बन्ने गरेको छ ।
ढाप, सिरान, माझ, तल्लो डुडे, माथिल्लो डुडे लगायत गाउँका १ सय ५० भन्दा बढी किसानले व्यवसायिक रुपमा सुन्तला खेती गर्दै आएका छन् । मंसिर १५ देखि माघ अन्तिमसम्म यो गाउँका किसान सुन्तला टिपेर बिक्री गर्न व्यस्त हुन्छन् । बोटबाट सुन्तला टिपेर खुल्ला ठाउँमा ल्याउने, ठूला–साना (ग्रेडिङ) छुट्याएर क्रेटमा राख्ने गरिन्छ । क्रेटमा राखेको सुन्तला जोख्दै व्यापारीलाई दिइन्छ । ‘यहाँको सुन्तला गुलियो र रसिलो छ भन्दै व्यापारी बगानमै लिन आउँछन्,’ गुरुङले भने, ‘माग धान्नै मुस्किल छ ।’
प्रकाशित : पुस १७, २०७८ १५:३५
कसरी बन्ने उत्पादनमा आत्मनिर्भर ?
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
टेलिकमका फोरजी ग्राहक एक करोड नाघे